Shuruudaha deynsiga maktabadaha - låneregler somaliska - Biblioteken i Kungsbacka
Shuruudaha deynsiga maktabadaha - låneregler somaliska
Kaarka maktabadu waa bilaash/lacag la’aan. Waxaad kaarka ku isticmaali kartaa dhammaan maktabadaha ku yaal Kungsbacka iyo baskayaga maktabada.
Kuwani waa xeerarkayaga:
Adiga ayaa mas'uul ka ah waxa aad deynsato. Wakhti ku soo celi oo ilaali waxa aad deynsato.
Waxaanu keydsanaa macluumaadka adiga kugu saabsan, ee tusaale ahaan lambarka shakhsiga, cinwaanka iyo lambarka telefoonka. Ma keydsano macluumaad ku saabsan waxaad deynsatey.
Anaga na soo wargali haddii kaarku kaa lumey. Adiga ayaa mas'uul ka ah haddii qof uu kaarkaaga isticmaalo.
Anaga na soo wargali haddii aad bedesho
Sidee ayaan wax u deynsadaa?
Waxaad u baahan ambarka sirta. Adiga ayaa too/otomaatig ahaan u deynsanaaya.
Ilaa muddo intee leeg ayaan deynsan karaa?
Ilaa muddo intee le'eg?
Buugta aan safka loogu jirin, buugaagta maqalka, buugaagta elektarooniga ah, muusiga, filimada xogta, musalsalada TV-ga 4 toddobaad
Buugaagta safka loogu jiro, joornaalada, ciyaaraha kombiyuutarka, ciyaaraha fiidiyowga 2 toddobaad
Filimado muuqaal ah 1 toddobaad
Waxaad u baahantahay kaarka lambarka sirta.
Waxaad adigu dooraneysaa lambar sirta ah oo 4 lambarka kooban. Koodhka waxa loo isticmaalaa si aad
wax uga deynsato maktabadda
dib wax ugu deynsato oo aad wax ugu xajisato adigoo bogga internedka isticmaalaya: bibliotek.kungsbacka.se
buugaagta iyo kumbuyuutarka
isticmaal wakhti ka badan oo furitaanka.
Sidee ayaan dib wax ugu deynsadaa?
Waxaad dib wax ugu deynsan kartaa laba jeer haddii aanu qof kale saf ugu jirin. Waxaad taas u samayn kartaa siyaabo kala duwan:
soo gal bogga Mina lån ee websaydhka
dib uga deynso adigoo soo maraaya mashiinadayada
soo wac 0300-83 80 31
Sidee ayaan wax u xajistaa?
Waxaad xajisan kartaa buugaag iyo waxyaabo kale oo aan khaanadaha/mafrishka saarneyn. Waxaad taas u samayn kartaa siyaabo kala duwan:
soo gal bogga internedka
la hadal shaqaalaha maktabadda
Sidee ayaan wax dib ugu soo celiyaa?
Waxaad wax dib ugu soo celin kartaa dhammaan maktabadaha ku yaal Kungsbacka iyo baska maktabada. Maktabada ayaad adiga toos/otomaatig ahaan wax ugu soo celinaysaa.
Haddii aad buugaagta elektarooniga ah iyo buugaagta elektarooniga ee maqalka ah deynsatey ayaa deynsigu toos isku tirtirayaa markii muddada deynsigu ay dhammaato.
Maxaa lacag la iskga qaadayaa?
Kuwani waa lacag la'aan:
kaarkaaga maktabadda ee koowaad
kombiyuutarka la xajisanaayo.
Kuwan ayaa lacag laga qaadayaa dadka waaweyn:
markaad wax xilli danbe soo celiso.
Kuwan ayaa lacag laga qaadayaa dadka waaweyn iyo carruurta:
helitaanka kaarka maktabadda oo cusub
wax koobi gareynta iyo wax daabacaada
buuga kaa luma ama aad googoyso.
Waxa qof weyn laguu xisaabinayaa markaa gaarto 18 sanno jir.
Ma isticmaali kartid kaarka illaa aad ka bixiso deyntaas.
Sidan ayay maktabadu u maareynaysaa macluumaadkaaga shakhsiga
Waa maxay macluumaadka shaqsigu?
Macluumaadka shaqsigu waxa ay tusaale ahaan noqon karaan, magaca qofka, cinwaankiisa iyo lambarka telefoonka.
Maxaan macluumaadka shakhsiga u keydsanaa?
Waxaanu keydinaa macluumaadka shakhsiga ee adiga kugu saabsan si aad wax uga deynsato maktabada oo aad kombuyuutarada maktabada ugu isticmaasho. Halkan ayaad ka akhrisan kartaa qaar waxa aanu ku sameyno macluumaadkaaga shakhsiga. Waxa aad sidoo kale ka akhrisan kartaa xuquuqdaada.
Sidee ayaan ku helnaa macluumaadkaaga shaqsiga?
Waxaan macluumaadkaaga helnaa marka aad anaga nala soo xiriirto ee aad kaarka maktabadda dalbato. Waxa aanu sidoo kale macluumaadkaaga ka soo qaadanaa Diiwaanka Dadweynaha ee Qaranka (Folkbokföringsregistret).
Waa maxay noo macluumaadka shaqsiga ee la iga keydsanayaa?
Halkan waxaad ka akhrisan kartaa nooc macluumaadka shakhsiga aanu keydsano iyo sababta aanu taas u sameyno.
Si ilme uu ugu heli karro inuu kaarka maktabada qaato ayaanu keydsanaa xogta shaqsiga ee ku sabsan ilmaha iyo masuulkaba.
Waxa aanu keydsaneynaa magacaaga, cinwaankaaga, cinwaanka emaylkaaga iyo lambarka telefoonka si aan kuula soo xiriirno.
Waxa aanu keydsaneynaa lambarkaaga shakhsiga, lambarka kaarka maktabada iyo lambarka deyn qaataha si aan qof kale magacaaga wax uu deynsan karin.
Haddii aad isticmaashid wakhtiga xilliyada furnaanshaha ka badan, ayaanu keydsan doonaa markaad maktabada soo gashay. Waxaanu taas u keydsanaa si aanu ugu ogaanno cidda maktabada isticmaashay haddii ay tusaale ahaan wax jabaan.
Markaad codeynayso ama aad aragtidaada ku saabsan buug ku jira boggayaga internedka wax ka qoreyso ayaanu ku siin doonaamagac isticmaale. Waxaan keydinaa magaca isticmaalaha si ay ugu suurtagasho in codeeyo ama buuq wax laga qoro.
Haddii aad deynsan karto buug hadal ah, ayaanu keydsanaa macluumaad kaas ku saabsan.
Ma keydsano macluumaad ku saabsan waxa aad deynsaneyso.
Macluumaadka ku saabsan waxa aad deynsaneyso ama aad ka qabanseyso kumbuyuutarrada maktabadda ayaanany cid kale siin doonin.
Waxaan tirtiri doonaa macluumaadkaaga shakhsiga haddii kaarkaaga maktabada aanad isticmaalin muddo labo sano ah. Waxaad marka aad doonto naga dalban kartaa inaan macluumaadkaaga maktabada, laakiin taas ma dhaceyso haddii aad leedahay wax deyn ah oo ay tahay inaad bixiso. Haddad isticmaashid wakhtiga xilliyada furnaanshaha ka badan, ayaanu keydsan doonaa xilligaad maktabadda soo gashay muddo 21 maalmood ah .
Waxa na caawisa shirkad maamusha boggayaga internedka iyo nidaamkeena deynsiga. Markaas ayaanu macluumaadkaaga sii doonaa shirkadda. Shirkaduhu waa inay raacaan shuruucdaha la midka ah annaga kuwayaga markay maareynayaan macluumaadkaaga.
Waxaad xaq u leedahay inaad ogaato macluumaadka aanu adiga kaa hayno. Maktabada la soo xiriir haddii aad taas rabto. Sidoo kale waxaad maktabadda la soo xiriiri kartaa haddii wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan uu khaldan yihiin.
Waxaad xaq u leedahay inaad cabasho ka soo gudbiyo sida aanu u maareyno macluumaadkaaga shaqsiga. Markaas ayaad la soo xiriiri kartaa wakiilka ilaalinta xogta shakhsiga ee degmada (dataskyddsombud). E-mayl u soo dir dataskyddsombud@kungsbacka.se Waxa aad sidoo kale warqad u soo diri kartaa kamuunka Kungsbacka, Dataskyddsombud, 434 81 Kungsbacka.